Homeसमाचारकरिश्माको बिषेश खुलासा, राजेश हमालको बि’रोध गर्ने समुह म महानायिका हुँदा पनि अ’सन्तुस्ट हुन्छन् (भिडियो सहित)
February 16, 2021 admin समाचार 5406
सन् २०१४ मा ना’यिका करिश्मा मानन्धरलाई नेपाल चलचित्र प्रावि’धिक संघले हङकङमा आ’योजना भएको ‘नेफ्टा फिल्म अवार्ड’मा ‘सदाबहार नायिका’को उ’पाधि दियो । करिश्मालाई ‘सदाबहार नायिका’को उपाधि दिनु भन्दा केही बर्ष अगाडि प्रा’विधिक संघले नै नायक राजेश हमाललाई ‘महानायक’को उ’पाधि दिएको थियो ।
उसो त, करिश्मालाई नेफ्टाले ‘सदा_बहार नायिका’को उपाधि नदिदा पनि दर्शक तथा मिडियाले उनलाई ‘सदाबहार नायिका’ नै भन्दै आएका थिए । यस’पछि, भने उनको नामको अगाडि यो ट्या’ग अझै विशेष तरिकाले प्रयोग गर्न थालिएको हो । उनै, करिश्मालाई केही दिन अगाडि काठमाण्डौमा आ’योजना भएको कार्यक्रममा एक संस्थाले ‘महानायिका’को उपाधि दियो ।
करिश्माले दुबोको माला ल’गाएरै सम्मान ग्रहण गरिन् । यसपछि भने करिश्मा’लाई दिइएको यो उपाधिमाथि प्रश्न चिन्ह पनि उठ्न थालेको छ । के करिश्मालाई उपाधिको आवश्यकता छ ? के करिश्मा मानन्धर आ’फैमा ब्रान्ड होइनन् ? उनी आफूलाई ‘महानायिका वा सदाबहार नायिका’मध्ये के भन्न चाहन्छिन् ? – इताजा खबरबाट
September 8, 2020 admin समाचार 14273
February 28, 2021 admin समाचार 6404
September 1, 2020 admin मनोरंजन, समाचार 89139